Shirkadda Saliidaha Gaadiidka ee Aflax oo Tababar u Qabatay Macaamiisheeda | Araweelo News Network
Shirkadda Saliidaha Gaadiidka ee Aflax oo Tababar u Qabatay Macaamiisheeda
Hargeysa (ANN)Shirkadda soo dejisa saliidaha baabuurta ee Aflax Company, ayaa soo gunaanaday tababar ay siinaysay macaamiisheeda saliidda ENOC.
Tababarkan oo ah mid sannadle ah ay iska kaashadaan shirkadda Aflax Company ee soo waarida saliidaha iyo shirkadda ay wadashaqaynta leeyihiin ee ENOC oo iyadu ka mid ah kambaniyada waawayn ee soo saara saliiddaha oo ka hawlgasha dalka Imaaraadka, ayaa tababar u soo xidhay ganacsato iyo gaadiidlay ka iibsada saliidda ENOC, kaas oo ku saabsanaa aqoon koradhsi la xidhiidha isticmaalka saliidda, daryeelka gaadiidka ee dhanka saliidda iyo waxtarkeedaba.
Xaflad lagu soo xidhay tababarkan oo lagu qabtay huteelka Damal ee magaalada Hargeysa habeenimadii Axaddii, waxa ka qaybgalay Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Maxamed Shukri, maamulka sare ee shirkadda Aflax Company, saraakiil ka socotay shirkadda ENOC, qaar ka mid ah macaamiisha ganacsatada ah ee isticmaala saliidda ENOC iyo ka qaybgalayaashii tababarkaasi.
Guddoomiyaha shirkadda Aflax Xaamud Jaamac Maxamed, ayaa sharraxaad ka bixiyey ujeeddada kulankaas, waxa uu yidhi, “Kulankani waa kii saddexaad ee sannadlaha ahaa, waanu inoo socon doonaa haddii Alle yidhaa. Waxa jiray tababaro hore oo shirkadda ENOC ina siisay iyadoo waqtigu adag yahay oo baasaaboorku adag yahay (isu-socodka), haddana ay ina siisay oo dadkii soo qaatay qaarkood imika inala fadhiyaan. Ciddii baasaaboor haysata imikadan wuu soo soconayaa oo waxa jira injineero shirkadda ka tirsan oo naloo soo tababari doono insha Allaah.”
Waxa kaloo uu si wayn ugu mahadceliyey masuuliyiinta ka socotay shirkadda ENOC socdaalka dheer ay u so mareen inay ka qaybgalaan kulanka.
Sidoo kale, laba injineer oo ka socday shirkadda ENOC Eng. Rajash iyo Ranjin oo iyagu ahaa macalliniinta tababarka bixinayey, ayaa tafaasiil ka bixiyey nuxurka duruusta ay bixinayeen oo ku wajaahnaa saliidda ENOC iyo isticmaalkeeda, faa’iidadeeda gaadiidka iyo muddada la isticmaalo, iyagoo sidoo kale faahfaahiyye noocyada ay ka kooban tahay saliiddan ay samayso shirkadoodu iyo baaxadda suuqyada lagu iibiyo.
Dhinaca kale, saraakiil ka socotay shirkadda ENOC oo hadallo ka jeediyey kulanka, ayaa ku ammaanay dalka Somaliland kaalinta uu kaga jiro suuq-gaynta saliidda ay soo saarto shirkadoodu.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Md. Maxamed Shukri, ayaa ku bogaadiyey shirkadda Aflax doorka ay kaga jirto dalka Somaliland ee ganacsiga iyo xagga ka qaybqaadashada baahiyihiisa, waxaannu yidhi, “Masuuliyiinta Shirkadda Aflax Company, waxay ka mid ahaayeen raggii ugu macquulsanaa ee markiiba keenay dalabkaanu u gudbinay ee taakulaynta abaaraha dalka ka jira. Waxa kaloo aannu ku ammaanaynaa dedaalkay sameeyeen iyo dadkay shaqaalaysiiyeen.”
Ugu dambayn, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Somaliland Siciid Axmed Jibriil, ayaa isaguna tilmaamay faa’iidada uu lahaa tababarkani iyo waxtarka uu u leeyahay gaadiidlayda.
Shirkadda Aflax ENOC waxay macaamiisheeda u samaysaa adeegyo kala duwan, iyadoo ka sakow tababarrada gudaha ay aqoon-koradhsiyo caalami ah ugu dirto dalka dibaddiisa.